I Davida sy i Solomona ary ny fanjakana (1 Sam.17)
Maneho ny taona volamena teo amin'ny tantaran'ny Isiraely ny fanjakan'i Davida sy i Sôlômôna. Ahoana anefa raha toa tsy nisy akory araka izay ambaran'ny olona sasany i Davida sy i Sôlômôna? Ahoana raha toa tsy lehibe tahaka izay anambaran'ny Baiboly izany ny fanjakan'izy ireo, araka ny filazan'ny olona sasany? Raha tsy misy i Davida, ahoana àry no hisian'ny Jerosalema renivohitry ny firenena? (2 Sam. 5:6-10). Raha tsy nisy i Davida dia tsy ho nisy ny tempoly naorin'i Sôlômôna zanany (1 Mpanj. 8:17-20). Raha tsy nisy i Davida dia tsy hisy ny Mesia ho avy, satria avy amin'ny taranany no nampanantenana ny Mesia (Jer. 23:5,6; Apôk. 22:16). Raha tsy tena nisy akory i Davida dia ho nilaintsika ny hanoratra tantara vaovao ho an'ny Isiraely, tantara izay samy hafa amin'ny ao amin'ny Baiboly. Hitantsika, araka izany, ny maha-zava-dehibe ny tantaran'ny Isiraely ao amin'ny Baiboly, izay antorn-pisian'ny Isiraely sy ny fiangonana eto amin'ity tany ity.
Vakio ny 1 Sam. 17. Ahoana no nanomezan'Andriamanitra fandresena lehibe ho an'ny Isiraely? Iza no nampiasaina hahazoana izany fandresena izany? Taiza no nisehoan'izany fandresena izany?
Mariho ny filazalazana ara-jeôgrafia mazava tsara mikasika ny toerana isehoan'ny ady ao amin'ny 1 Sam. 17:1-3. Antsoina hoe Khirbet Qieyafa izany toerana izany ankehitriny. Nandeha tany amin'izany toerana izany ireo mpanao fikarohana momba ny fahagola ka nandavaka ary nahita tanàna iray voaorina tamin'ny andron'i Saoly sy i Davida mpanjaka. Nahita vavahady anankiroa koa izy ireo tamin'ny fandavahana nataony. Vavahady tokana ihany no hita tany amin'ny ankamaroan'ny tanàna tamin'ny andron'ny TT; manampy antsika hahafantatra, araka izany, ireo vavahady roa ireo fa i Saraima izany tanàna izany. Miresaka momba io tanàna io ny Baiboly ao amin'ny 1 Sam. 17:52, ny teny hebreo "Shaaraim” izay midika hoe "vavahady roa".
Raha izany no izy, dia izay isika vao mahafantatra ny momba io tanàna fahizay ao amin'ny Baiboly io. Nahitana zavatra anankiroa nisy soratra hebreo tamin'ny 2008 sy 2013. Inoan'ny olona maro fa ireo no soratra hebreo tranainy indrindra hita hatrizay! Ahitana ny anarana hoe "Eshbaal" (Esbala) eo amin'ilay zavatra hita faharoa. Anarana nentin'ny iray tamin'ireo zanak'i Saoly mpanjaka izany (1 Tant. 9:39).
Nanao fandavahana ny tany tany amin'ny tanàna avaratra, Tel Dan, ny mpanao fikarohana momba ny fahagola tamin'ny 1993 ka nahita zavatra iray nosoratan'i Hazaela mpanjakan'i Damaskôsy. Noraketiny an-tsoratra ny fandreseny ny "mpanjakan'ny Isiraely" sy ny mpanjaka iray avy tao "an-tranon'i Davida". Ny "trano" dia sary an'ohatra iray nanehoana ny mpianakavin'ny olona iray tamin'ny andron'ny TT. Tahaka izany koa no iresahan'ny Baiboly ny amin'ny fianakavian'i Davida. Porofo lehibe, araka izany, io soratra io fa tena nisy tokoa, araka ny fanambaran'ny Baiboly, i Davida.